‘Abadlali abazitholele indawo kwiBafana’
UDAVID Notoane oqeqesha iqembu lesizwe le-Under 23 uthi akanankinga nokuhlehliswa kwemidlalo yama-Olympic esizoba ngonyaka ozayo Isithombe: BACKPAGEPIX
zakhele xaba | March 26, 2020
UMQEQESHI weqembu lesizwe lika-Under 23, uDavid Notoane, uthi abadlali beqembu ababhukule bathole indawo kwiBafana Bafana ngesikhathi besalinde imidlalo yama-Olympic ehlehlisiwe.
NgoLwesibili i-International Olympic Committee imemezele ukuthi ama-Olympic obekufanele adlale kusukela ngoJulayi 24 kuya ku-Agasti 9, ngeke esaba khona ngenxa yokusabalala kobhubhane icoronavirus. Ihlehliselwe unyaka ozayo.
Iqembu lika-Under 23 bekufanele liyodlala imidlalo yobungani emibili neJapan ngempelasonto.
UNotoane uthe leli yithuba labadlali beqembu lika-Under 23 lokumkhombisa ukuthi kubafanele ukuya kuma-Olympic ngokwezinga labo.
“Kufanele babhukule baziphendlele indawo kwiBafana Bafana. Uma behluleka ukwenza lokho kufanele uzibuze ukuthi bakulungele ngempela yini ukudlala emqhudelwaneni omkhulu njengama-Olympic. Esikwatini ngiqoke abadlali iningi labo elidlala njalo emaqenjini elikuwo. Kufanele likwazi ukukwenza lokho,” kusho uNotoane.
Nakuba ukuhlehliswa kwama-Olympic kwamukelwe ngezinhliziyo ezimhlophe kwezinye izinhlaka kodwa kungase kube yinkinga lapho kusebenza khona iminyaka njengasebholeni. UNotoane ubebize abadlali abawu-78 abekade ezoqoka kubona isikwati azodlala ngaso kuma-Olympic okukhona kubo asebevele baneminyaka ewu-23.
Lokhu kusho ukuthi bazobe bengasavumelekile ukudlala ngonyaka ozayo. Ikomidi lama-Olympic licele ukuthi nakuba imidlalo izoba ngonyaka ozayo kodwa ibizwe ngokuthi eka-2020.
“Ngesikhathi ngenza uhla lwabadlali abawu-78 abantu bangihleka bethi yini lena engiyenzayo. Esikwatini sami kukhona nabadlali bango-1998,1999 nabaka-2000.
“Uma kukhona okufanele baphume ngenxa yokuphikwa yiminyaka, sizosala sinaso isikwati esiqinile.
“Kodwa ngiyethemba ukuthi ikomiti lama-Olympic lizolenza icebo. Ngeke kube wubuhlakani ukukhipha abadlali abazobe sebephikwa yiminyaka ekubeni besebenze kanzima ukuzibekisela indawo. Kuyiphupho labo bonke abadlali ukudlala kuma-Olympic.”
Mayelana nokuhlehliswa kwemidlalo, uNotoane uthe: “Ngiphoxekile kancane. Bengilindele ukuthi izobekwa kuSepthemba noma ku-Okthoba. Kodwa kuzobenza ubulungiswa kulabo abancintisana ngabo­dwana ngoba bazothola isikhathi esanele sokuzulingiselela. Kukhona nalabo abebenga­kazibekiseli indawo. Nathi besizolimala ngoba uma kwenzeka iligi iphela ngoJuni besingeke sisithole isikhathi sokuzilungiselela. Ukuhlehliswa ngonyaka kusinika sonke ithuba lokuzicija kahle.”